Sida loo suuro geliyo faylka iyo galka faylka Windows | Madasha Mobile -ka
Dhamaadka ayaa daba socday markii awood loo siiyay feyl iyo fayl isugeyn waa in la yareeyo baaxadeeda si meel badan loogu helo kombiyuutarradayada. Runtii waa xal xiiso leh, mar haddii la adeegsado ma saamaynayso nuxurka ama qaab -dhismeedka faylka. Ma jiro is-dhaafsi, booska ay haystaan ​​si fudud baa loo yareeyaa.
Tani waa mawduuca aan kaga hadli doonno qoraalkan. Siyaabaha ugu fiican ee loo fulin karo qaliinkan oo aan ugu raaxaysan karno faa'iidooyinka uu na siinayo. Laakiin ka hor intaanan arrinta gelin, la yaab haddii ay lagama maarmaan tahay ama habboon tahay in la suurogeliyo faylka iyo faylka riixa on our disk drive.
1 Goorma si loo suurogeliyo isku -darka faylka iyo faylka?
2 Riixitaanka faylka NTFS
2.1 Sida loo suurogeliyo isku -shaandheynta faylka iyo faylka?
2.2 Sidee loo curyaamiyaa isku -duubidda faylka iyo faylka?
3 Adeegso Tifaftiraha Siyaasadda Kooxda si aad u curyaamiso isku -duubnaanta faylka
Goorma si loo suurogeliyo isku -darka faylka iyo faylka?
In kasta oo guud ahaan had iyo jeer ay tahay tallaabo lagu taliyay, haddana waxaa si gaar ah loogu talinayaa in lagu cadaadiyo faylasha xaaladaha soo socda:
Marka ay jirto a u baahan tahay inaad meel dhigato kombuyuutarkeena. Hadday sidaas tahay, waxaa lagu talinayaa in la cadaadiyo faylasha ugu waaweyn ama kuwa marar dhif ah la isticmaalo marka hore.
Xaaladda qasabka ah u dir faylal badan emayl ahaan. Faylasha aad u waaweyn lama rari karo.
Labada fayl iyo faylka shaqsiyeedba waa la cadaadin karaa. Xaaladda dambe, isku -buufin ayaa si isku mid ah loogu dabaqaa dhammaan faylasha iyo fayl -hoosaadyada ay ku jiraan.
Markaad cadaadinayso a galka. Labadan fayl, faylka asalka ah iyo faylka la cadaadiyey, gabi ahaanba waa madaxbannaan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa taas dhammaan faylasha looma cadaadiyo heer isku mid ah. Dhab ahaantii, waxaa jira "darajooyin" kala duwan oo lagu yareynayo cabirka faylka, iyadoo ku xiran waxa ku jira. Tusaale ahaan: faylasha qoraalka waa la cadaadiyey si ka badan faylasha sawirka.
Riixitaanka faylka NTFS
Haddii aan la shaqeyno nidaamka hawlgalka Windows, waxaan haysannaa aalad aad u wanaagsan oo aan ku fulinno falkan oo kale: nidaamka faylka Nidaamka Faylka Farsamada Cusub NTFS).
Gudaha Windows 10, nidaamkani wuxuu ku daraa a hawsha cufnaanta fudud si gaar ah loogu talagalay in lagu yareeyo cabirka faylka. Faa’iidada weyn ee hawshani leedahay ayaa ah, marka lagu daro kaydinta meel badan oo kombiyuutarka ah, waxay u oggolaanaysaa marin u helidda faylasha iyada oo aan loo baahnayn in la adeegsado burburinta gacanta.
ka faa'iidooyinka of NTFS riixo waa badan oo aad u caan ah. Ugu horrayn, waa xal wax ku ool ah oo bannaan oo bannaan. Dhinaca kale, waxay noo oggolaanaysaa inaan dejinno unug si aan u kaydiyo faylashaas aan si dhif ah u isticmaalno.
In kasta oo ay jiraan wax kasta, haddana waxaa jira qaar dib udhacyada. Waa in la ogaadaa in awood -siinta NTFS ay saameyn ku yeelan karto waxqabadka aaladahayaga. Tani waxay dhacdaa, waxyaabo ay ka mid yihiin, sababtoo ah feylasha ayaa la tirtiray oo mar kale la cadaadiyey mar kasta oo aan helno. Tani waa geedi socod aad u faa'iido badan.
Sida loo suurogeliyo isku -shaandheynta faylka iyo faylka?
Habka ugu fudud uguna tooska badan ee lagu cadaadin karo faylasha iyo faylalka Windows 10 adeegsanaya Furaha Faylka. Cadaadiska waxaa lagu samayn karaa faylasha shaqsiyeed, fayl, iyo xitaa wadid dhan. Geedi socodku waa degdeg oo wuxuu u socdaa sidan:
Marka hore, waa inaad midig-gujisaa faylka ama faylka aad rabto inaad wax ka qabato.
Waxaan dooranaa ikhtiyaarka ah «Guryaha».
Halkaa, tabka "Guud", waxaan xulanaa "Hormarsan" si loo helo sifooyin horumarsan.
Tani waa tallaabada muhiimka ah: gudaha "Isku cadaadi" ama "Sifaynta sifooyinka" waxaan calaamadeynaa ikhtiyaarka ah "Ku cadaadi nuxurka si aad u keydiso meesha diskka".
Si aad u ansixiso, guji "OKAY" iyo ka dib "Codso".
Hab kale oo lagu suurogeliyo faylka iyo isku -duubnaanta faylka waa iyada oo loo marayo isla markiiba amarka, iyadoo la adeegsanayo amarka isafgaradka. Tani waa sida loo sameeyo:
Waxaan tagnaa galka aan rabno inaan ku cadaadinno, riix Shift + Control + Badhanka Midig, si loo doorto ikhtiyaarka ah "Fur daaqadda amarka halkan".
Waxaan galnaa amarka u dhigma ficilka aan rabno inaan sameyno:
Si loo cadaadiyo hal fayl: magaca faylka is haysta / c.
Halkii, si aan u cadaadinno dhammaan faylasha ku jira galka aan adeegsanno: filename is haysta / c *.
Iyo in la cadaadiyo faylasha iyo fayl -hoosaadyada faylka: magaca faylka is haysta / c / s.
Sidee loo curyaamiyaa isku -duubidda faylka iyo faylka?
Si loo sameeyo ficil liddi ku ah, taas oo ah, curyaaminta feylka faylka ee Windows, waxaan si fudud u fulin doonnaa tallaabooyin la mid ah kuwa suurtagelinaya, laakiin aan ka fiirsan doonno ikhtiyaarka aan hore u calaamadeynay:
Mar labaad waxaan ku riixnaa badhanka midig ee galka ama faylka aan rabno inaan ku dhaqaaqno.
Marka xigta waxaan aadnaa ikhtiyaarka ah «Guryaha».
Waxaan raadineynaa tab "Guud", oo aan ku xulanno "Hormarsan" si loo awoodo in la helo sifooyin horumarsan.
Farqiga ayaa ku jira tallaabadan: markaan ku jirno "Isku cadaadi" ama "Sifaynta sifooyinka" waxaan ka qaadnaa xulashada "Ku cadaadi nuxurka si aad u keydiso meesha diskka".
Ugu dambayntii waxaan ansixin doonaa hannaanka annagoo marka hore riixeyna "OKAY" iyo ka dib "Codso".
Waa kuwan hababka la raaco iyadoo la adeegsanayo isku -darka NTFS iyo astaamaha kala -goynta. Laakiin weli waxaan haysannaa aalad kale oo aan ku falanqeyno si aan u yeelano xitaa xakameyn adag oo ah tallaabooyinka noocaan ah ee kombiyuutarkeena.
Adeegso Tifaftiraha Siyaasadda Kooxda si aad u curyaamiso isku -duubnaanta faylka
Tani waa habka ugu dhaqsaha badan haddii waxa aan rabno ay tahay inaan ka hortagno Windows 10 in lagu cadaadiyo faylasha kombiyuutarkeena oggolaansho la'aan: naafo isku -darka faylasha NTFS iyadoo la adeegsanayo tifaftiraha siyaasadda kooxda.
Waa qalab gudaha ah oo ay leeyihiin nidaamyada hawlgalka Microsoft. Tafatirahaani wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku jimicno a xakameyn weyn oo ku saabsan hawlgalka PC -gayaga oo waxay na siinaysaa awood aan ku samaynno hagaajinno gaar ah oo aan laga heli karin Guddiga Xakamaynta ama Goobaha Nidaamka Guud.
Waa kuwan tillaabooyinka la raacayo si aad u curyaamiso faylka NTFS oo leh Tifaftiraha Siyaasadda Kooxda:
Waxaan riixnaa furayaasha Windows + R in la furo ordo sanduuqa wada -hadalka.
Sanduuqa aan ku qorno MSC oo guji «Gali».
Mar haddii Tifatiraha Siyaasadda Kooxda Waxaan doorannaa dariiqa ikhtiyaarka soo socda: Qalabaynta Kombiyuutarka> Habyaalada Maamulka> Nidaamka> Nidaamka Faylka> NTFS.
Laga soo bilaabo xulashooyinka hoos ku furan, waxaan doorannaa "Ha u oggolaan in la cadaadiyo dhammaan mugga NTFS". Halkaas ayaan gujinaa "Karti leh" oo ku xaqiiji badhanka "Codso".
Si aad u samayso ficil liddi ku ah, yacnii, karti -gelinta, kaliya raac isla tallaabooyinkan oo lambarka tallaabada 4 dooro "Disable" beddelkii "karti leh".
Si kastaba xaalku ha ahaadee, si isbeddelada ay u hirgalaan waa inaan dib u bilownaa kombiyuutarkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Sida loo suurogeliyo isku -duubnaanta faylka iyo galka Windows
Sida loo furo faylasha .xml